Ulauncher: mpandefa fampiharana tena tsara ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Ny sasany Matetika ny tontolon'ny birao Linux dia misy mpandefa fampiharana izay isaina matetika miaraka amin'ny endri-javatra isan-karazany izay afaka mameno ny fampiasana ny rafitraa miaraka amin'ny mpampiasa, fa ny hafa imbetsaka dia tsy toy izany matetika.
Raha ny an'ny mpampiasa Unity dia matetika izy ireo no mitazona ny Dash hikaroka rindranasa ary hampandeha azy. Na, mba hanafainganana azy io haingana, dia azonao atao koa ny manampy ireo rindran-damosinao izay matetika ampiasaina amin'ny alàlan'ny default amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana na amin'ny bara fizahana.
Na izany aza, ny olona sasany dia tsy afa-po amin'ny zavatra efa voafaritra mialoha na tsy maintsy mameno ny barany amin'ny sary masina. Izany no antony hiresahantsika androany momba ny mpandefa fampiharana izay mety hahaliana anao.
1 Momba an'i Ulauncher
2 Ahoana ny fametrahana ny mpandefa fampiharana Ulauncher amin'ny Linux?
3 Ahoana ny fampiasana Ulauncher?
Momba an'i Ulauncher
Anisan'ireo mpandefa fampiharana maro azo alaina ho an'ny GNU / Linux, Ulauncher dia niavaka noho ny maha-azo ampiharina sy ny hafainganana.
Ulauncher dia rindrambaiko malalaka sy misokatra izay voasoratra amin'ny fiteny fandaharana Python, ankoatry ny fampiasana loharanom-pahalalana vitsivitsy, miasa saika amin'ny tontolon'ny birao Linux rehetra izy io.
Anisan'ireo azontsika tanisaina hitantsika Gnome, Kanelina, Firaisankina, Mate, Xfce, Lxde ary Openbox miaraka amin'i Tint2.
Ulauncher dia manolotra asa fikarohana, izay ahafahanao, ohatra, manokatra rindranasa napetraka, mizaha lahatahiry ary fisokafana rakitra, ary koa mikaroha Google, Stackoverflow ary Wikipedia.
ny sasany fiasa izay azontsika asongadina avy amin'ny Ulauncher hitantsika:
Instant App Launcher - Ulauncher dia manome valin'ny fikarohana eo noho eo. Manana safidy hitadidy ireo safidinao teo aloha ihany koa ianao ary misafidy ho azy ireo programa na rakitra fampiasa be indrindra.
Fikarohana manjavozavo: manorata anarana fampiharana fa aza manahy ny amin'ny fomba fanoratanao azy.
Hitsin-dàlana - Hatsarao ny lalan-kizoranao amin'ny hitsin-dàlana azo alain-tahaka. Mamorona ny hitsin-dàlana amin'ny fikarohana amin'ny Internet na ny script-nao mihazakazaka.
Browser Directory haingana - Mitadiava mora ny rakitra sy lahatahiry. Ohatra, soraty ~ na / hanombohana ny lisitry ny lahatahiry sy atiny.
Hitsin-dàlana sy fanitarana - Hatsarao ny workflow-nao amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana sy fanitarana azo ekena. Mamorona hitsin-dàlana ho an'ny fikarohana Internet na ny script-nao, na mametraha fanitarana an'ny antoko fahatelo.
Ahoana ny fametrahana ny mpandefa fampiharana Ulauncher amin'ny Linux?
Raha te hanandrana na hametraka Ulauncher amin'ny rafitrao ianao dia tsy maintsy manokatra terminal ianao ary manatanteraka ny baiko arakaraka ny fizarana Linux ampiasainao.
Para apetraho Ulauncher amin'ny Ubuntu 18.04 ary ireo rafitra nalaina avy tao, tsy maintsy manampy tahiry ao amin'ny rafitr'izy ireo izy ireo. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manoratra izy ireo:
Ary farany dia mametraka miaraka amin'ny:
Raha izy ireo Mpampiasa Debian na rafitra mifototra amin'izany, azon'izy ireo atao ny mametraka ny app amin'ny alàlan'ny fisintomana ireto fonosana deba manaraka ireto, manao izy ireo avy amin'ity rohy ity.
Vita ny fisintomana hametahana ny fonosana amin'ny:
Raha manana olana amin'ny fiankinan-doha ianao dia voavaha ireto:
Raha ho an'ireo izay Tokony hisintona ireo mpampiasa Fedora ny fonosana farany indrindra hatramin'izay ity rohy ity
Ary ny fametrahana azy dia tsy maintsy soratany:
Ho an'ireo mpampiasa na misy kinovan'ny misintona openSUSE fonosana ity.
Raha toa ka Ireo mpampiasa CentOS 7 dia misintona ny fonosana avy amin'ny Ity rohy ity ary apetaho amin'ny:
Farany ho an'ny ireo mpampiasa ny Arch Linux, Manajaro, Antergos na izay derivative an'ny Arch Linux dia manana fomba roa hametrahana izahay.
Ny voalohany dia avy any AUR noho izany dia tsy maintsy ampiasain'izy ireo ao amin'ny rakitra pacman.conf izy ireo ary ny baiko hapetraka dia:
Ny fomba hafa hapetraka dia amin'ny fanoratana:
Ary izany no izy, hapetrak'izy ireo ao amin'ny rafitr'izy ireo ity mpandefa launcher ity.
Ahoana ny fampiasana Ulauncher?
Ny mampiasa ihany tsy maintsy mampiasa ny iray amin'ireo hitsin-dàlan'izy ireo izy ireo:
Ctrl + Space - Hanehoana na hanakatonana an'i Ulauncher
/ - Mikaroka rakitra.
so - Fikarohana mivantana momba ny stackoverflow.
g - Fikarohana Google.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ulauncher: mpandefa fampiharana tena tsara ho an'ny Linux
ny tena marina dia programa tsara amin'ny maha mpandefa fampiharana izy io, na izany aza mandreraka ny manoratra baiko ho an'ny fikarohana raha miaraka amin'ny hafa toa an'i albert dia mila manoratra izay tadiavinao fotsiny ianao, marina fa haingana sy maivana be izy nefa izaho ihany mieritreritra fa raha tsy noho ny antsipirian'ny fikarohana rakitra dia fampiharana tsara izany, amin'izao fotoana izao dia mijanona miaraka amin'i albert aho, tamin'ny androny dia nametraka synaps aho saingy tampoka dia nijanona tsy mandeha tsara intsony ..
marcio dia hoy izy:
Azafady ry zalahy, apetraho any amin'ny toerana misy ny daty namoahana ilay lahatsoratra, raha tsy izany dia tsy manan-tsafidy isika afa-tsy ny mahita ao amin'ireo fanehoan-kevitra momba ny taona navoaka ny lahatsoratra.
Valiny tamin'i Marcio
Mihobia! Ity dia daty famoahana 26/06/18